Dabere na Akụkọ ndị ahịa, ugbu a ọkaibe kachasị mma n'ahịa bụ Galaxy S8 | Akụkọ akụrụngwa
Dabere na Akụkọ ndị ahịa, ama kachasị mma na ahịa ugbu a bụ Galaxy S8
Taa ọ dịghị onye juru na ọ bụ naanị Samsung na Apple bụ naanị ụlọ ọrụ ndị fọdụrụ na oke njedebe nke ekwentị mkpanaaka. Ọtụtụ anwaala dị ka LG, Sony n'oge Google na Google Pixel, ọnụ ọnụ na-ahụbeghị na mpụga United States na maka ugbu a ọ dị ka ihe agaghị agbanwe. Akụkọ ndị ahịa bụ nzukọ na-enweghị uru na-agbachitere ọdịmma nke ụmụ amaala na mgbakwunye na ịmepụta ndụmọdụ dị iche iche maka ndị ọrụ Ha nwere ike ịnọ na nchekwa mgbe ịzụrụ ihe, ma elektrọnik ma ọ bụ ụdị ọ bụla.
Dabere na akụkọ ya kachasị ọhụrụ, ugbu a ọmarịcha ama ama anyị nwere ike ịchọta n'ahịa bụ Galaxy S8 na nwanne ya nwoke nke okenye bụ S8 +, guzo n’elu Apple na iPhone 7 Plus ya na igwefoto abụọ. N'etiti isi ihe dị mma nke akụkọ ndị ahịa kachasị ọhụrụ na-enye, anyị na-ahụ atụmatụ dị egwu nke nwere ihu ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo, gụnyere akụkụ ya na ndụ batrị n'etiti isi ihe kachasị ama.
Ihe ọ dị ka nzukọ a na-enweghị uru anaghị enwe mmasị ọ bụla bụ ọnọdụ nke ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, ọtụtụ ndị enweghị mmasị na ya, ebe ọ na-edebe ya n'akụkụ igwefoto kama n'okpuru ya, yabụ zere itecha oghere igwefoto oge obula anyi mepere onu. Onye inyeaka ọkara, Bixby dịkwa n'akụkụ na-adịghị mma nke ọnụ a.
O doro anya na Isi ihe abụọ a na-adịghị mma nke Samsung natara maka S8 dị mfe izere, ebe ọ bụrụ na Bixby adịghị, nke kachasị mma ga-echere ọnwa ole na ole wee bido ya na Nkọwa 8 ma ọ bụ na ọgbọ ọzọ. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, anyị amaghị ihe gafere uche nke ndị na-ese ihe, mana ọ dabara nke ọma na akụkụ a ezughị ezu maka ịghara ịzụta ọnụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere mbụ ama na nwere ike see ahịa na integrated akara mkpisiaka mmetụta n'okpuru ihuenyo. Ọnụ a nke Vivo rụpụtara ga - abụ (ma ọ bụrụ na e gosipụtara ya n'oge na - adịghị anya) nke mbụ na teknụzụ a, ebe Samsung na Apple zubere, dịka asịrị niile si dị, iji mejuputa ya na Nkọwa 8 na iPhone 8, mmejuputa nke M gaara eme tupu ma ọ dị ka ọ bụghị naanị nwere nsogbu arụmọrụ, mana yana nsogbu arụmọrụebe ọ bụ na imeghe ọsọ bụ nnọọ nwayọọ tụnyere ugbu a sensọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Dabere na Akụkọ ndị ahịa, ama kachasị mma na ahịa ugbu a bụ Galaxy S8
Dell Advanced 4k bụ 100 inch, 120 Hz, 4k mma laser projector